Posted by Ashin dhamma at 10:13 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 4:11 AM 38 comments
Posted by Ashin dhamma at 10:09 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 12:24 PM 1 comments
လေးစားအပ်ပါသော ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား တပ်မတော်ပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျား…
ယခုအချိန်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် အဆိုးဝါးဆုံး၊ အကြပ်တည်းဆုံး၊ အခက်အခဲဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံးသော နိုင်ငံရေး စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ နအဖ စစ်မိစ္ဆာကောင် သန်းရွှေ အုပ်စုသည် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲမှ အပြီးပိုင် ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ လုပ်ဆောင်လိုက်ရုံမက ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး တစ်ခဲနက် မဲပေးထောက်ခံခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပါ အပြတ်ရှင်းဖို့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ထိုတွင်မက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို အပြတ်ရှင်းလင်းရန် လုပ်ဆောင်တော့မည်ဟု ကြပ်ပြေး စစ်အထူးသတင်းရပ်ကွက်မှ သိရှိရပါသည်။
သန်းရွှေအုပ်စုသည် အကြံပက်စက်ရုံမက ကမ္ဘာ့အယုတ်မာဆုံး လူသားအဖြစ် အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဘာမဆို လုပ်ဆောင်ဝံ့သူအဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်မှာ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပေ။ တိုင်းပြည်၏ သေရေး ရှင်ရေးတစ်မျှ အရေးကြီးနေသော ယခုအချိန်အခါတွင် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု၏ စုပေါင်းညီညွတ်မှု အားသည်သာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော ထွက်ပေါက် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ကို သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကိုးစား အားထားရုံမျှမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ လေးစား ဂုဏ်ယူရသည့် သားကောင်းရတနာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ အနှစ်(၂၀) လုံးလုံး ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံကာ တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အသက်အန္တရာယ်မှာ အစိုးရိမ်ရဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ဘုံရန်သူ နအဖသည် ကြူငုတ်စစ်ဆင်ရေး ဟုအမည်ပေးထားသော အပြတ်ရှင်းစနစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုနှင့် မျိုးချစ်တပ်မတော်သားအားလုံး အနာဂတ်မြန်မာပြည် သူရဲကောင်းများ လက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံရစေရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ၍ စုပေါင်းညီညွတ်စွာ နအဖ စစ်အာဏာရူးလူတစ်စုအား အမြစ်ပါမကျန် စုပေါင်းတော်လှန်ကြပါရန် အထူးတိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပါသည်။မိမိတို့ သွေးသောက် တော်လှန်ရေး ကျောင်းသားရဲဘော်များအနေဖြင့် ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ကာ ရသည့်နည်းဖြင့် နအဖစစ်အာဏာရူးလူတစ်စုအား အသေခံ တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း စစ်ကြေငြာသတိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by Ashin dhamma at 11:13 AM0comments
စိန်ခေါ်မှုတွေကို ညီညွတ်စွာ ရင်ဆိုင်ကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ု တိုက်တွန်း
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေဟာ NLD ကိုရော၊ မြန်မာပြည်သူ အားလုံးအတွက်ပါ စိန်ခေါ်မှုတရပ် ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီစိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်ကြဖို့ ပြည်သူတွေအားလုံး ညီညွတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီနေ့ သွားတွေ့ခွင့် ရခဲ့တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမြင်သဘောထားကို သိနိုင်ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မေးကြည့်ပါတယ်။
“ဒေါ်စုပြောတာက ဒီဥပဒေတွေက ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတယ်လို့ ထင်စရာ ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတယ်ဆိုရင် အလွန်ရှက်ဖို့ ကောင်းတာပဲတဲ့။ ဒီဥစ္စာ မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့။ ဥပဒေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ကျဆင်းစေတယ်တဲ့။ အဲဒီလို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“တစုံတယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားတယ်လို့ ထင်မြင်စရာ ပေါ်နေတယ်။ အဲဒီလို ထင်မြင်ချက် ပေါ်တာကိုက မကောင်းဘူး။ ဒါဟာ တဦးတယောက်အတွက် ဥပဒေ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဥပဒေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်။ ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကတော့ ဒီဥပဒေတွေက အဖွဲ့ချုပ် အတွက်ရော၊ အားလုံးအတွက်ပါ တကယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေပဲ။ အဲဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြဖို့ လိုတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ညီညွတ်ဖို့၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ရှိဖို့ လိုတယ်လို့ အဲဒီလို ပြောတာပါ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၊ ကျော်ဖြတ်ဖို့၊ ကျော်လွန်ဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ဟာ ပိုပြီးတော့ ညီညွတ်မှု ရှိရှိနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့။”
အခု ပါတီက ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာ မှတ်ပုံမတင်ရင် ဒီပါတီက ဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ အန်တီစု အနေနဲ့ ပါတီရဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
“အဲဒီဟာကတော့ အလုပ် လုပ်ကြရမယ်။ ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဒီ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ဆောင်ရွက်သင့်တယ် ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတွေးခေါ်မှုတွေကတော့ လောလောဆယ် ကျနော် ထုတ်ပြန်ဖို့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ CEC အဖွဲ့မှာ တင်ပြပြီးတော့ အဲဒီက အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါကျရင်တော့ ကျနော်တို့ ပြောပါမယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ နှစ်ခုကို အန်တီစုအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဘယ်လိုဝေဖန်တာမျိုး ရှိပါသေးလဲ။
“ဒီဥပဒေတွေကတော့ တဖက်သတ် ရေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေပဲတဲ့။ မျှတမှု မရှိဘူး၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ ဟာကိုလည်း သူတို့က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲ ရေးထားတော့ ဒါလည်း တမျိုးတော့ ကောင်းပါတယ်တဲ့။ ပြည်သူလူထုက သူတို့သဘောထားကို အလွယ်တကူ သိရတာပဲလို့ အဲဒီလို ပြောပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ထပ်မံချထားခဲ့တဲ့ အမှုအတွက် အထူးအယူခံ တင်သွင်းဖို့ ကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ တရားရုံး သွားပြီးတော့ ဒေါ်စုရဲ့အမှုတွေ ရေးထားတာတွေ အတည်ပြုချက် ယူတာပါ။ ၂၆ ရက်နေ့က တရားရုံးချုပ်က ချမှတ်တဲ့ အမိန့်၊ ဒီအမိန့် မိတ္တူတွေကို မနေ့ကမှ ရတယ်။ အဲဒီရတဲ့ မိတ္တူတွေကို ဒေါ်စုကို ပြတယ်။ ဒီအထဲက ကျနော်တို့ တန်ပြန်တင်ပြဖို့ အချက်တွေကို ဆွေးနွေးတယ်။
“အမှုသွား အမှုလာက ဥပဒေအရ ရှင်းတယ်။ ဒေါ်စုက ဘာအပြစ်မှ မကျူးလွန်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ အရေးယူတာတွေလည်း အကုန်မှားနေတယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ ထောက်ပြတာ။ အခြေအနေကတော့ အမြန်ဆုံး တင်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ပြောချင်တယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ashin dhamma at 11:05 AM0comments
အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး
NEJ /၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၀
ရုရှပြည်၌ ကြီးစိုးခဲ့သော ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော် အာဏာရပြီးမှ ပြုတ်ကျသွားရသည်။ အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာပါက မြန်မာများအတွက် သင်ခန်းစာရနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။ (၄၈) နှစ် အာဏာရနေသော မြန်မာစစ်တပ်သည်လည်း ကိုယ်ကျိုးရှာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီတမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များကို ရှိခိုးနေသော အရပ်သားအချို့ကိုကြည့်၍ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ဟု ပြောဆိုနေသူများ ရှိသကဲ့သို့ ရုရှပြည်သူများကိုလည်း ကျွန်စိတ်ရှိသူများဟု တချိန်ကဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ ပြောရသည်မှာလည်း အကြောင်းရှိ၏။ နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သည့်အစဉ်အလာကို မှတ်မိသူ ရုရှပြည်၌မရှိဟု ဆိုသည်။ အာဏာရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာခြင်းသည် ရုရှဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သည်ဟုပင် ပြောဆိုကြ၏။
အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်မည်မဟုတ်ဟု တိုင်းသူပြည်သားများက ယုံကြည်နေသမျှကာလပတ်လုံး ယင်းအာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲနေမည်ဟု ဆိုရိုးရှိသည်။ စစ်အစိုးရကို မည်မျှပင် မုန်းတီးစေကာမူ စစ်ဗိုလ်ကို အရပ်သားက မဖြုတ်နိုင်ဟု ယုံကြည်နေသမျှ စစ်အစိုးရ သက်ဆိုးရှည်နေမည်မှာ သေချာ၏။ ဤယုံကြည်ချက် ပျက်ပြားလာမှသာ အာဏာရှင်အစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်သည် နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းရန် စစ်အစိုးရကြံစည်နေသောအချိန်ဖြစ်၍ အရေးကြီး၏။ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြုပြင်ရန် အာဏာရှင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းချိန်သည် အာဏာရှင်အတွက် အန္တရာယ်အကြီးဆုံး အချိန်ဖြစ်သည်ဟု ပြင်သစ်နှင့် အမေရိကန်တော်လှန်ရေးကို လေ့လာသူပညာရှင် တော့ခ်ဗီးလ် (Tocqueville) က ပြောဖူးသည်။ ပြုပြင်ရေးလုပ်ခြင်းသည် မပြောင်းလဲနိုင်သည့် အာဏာရှင်စနစ်ဆိုသော အယူအဆ ပျက်ပြားလာပုံကို ပြသရာ ရောက်ပေသည်။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွင် ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အခြေခိုင်လွန်းသည့်အတွက် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယ်တိုင်ကဖျက်မှပင် ပျက်လိမ့်မည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်၌ ဂိုဘာချော့ (Gorbachov) ထွက်ပေါ်လာသည်။ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်အတွက် အပြောင်းအလဲမလုပ်လျှင် မဖြစ်တော့ဟု ယူဆလာကြသည်။ အနည်းအကျဉ်း ပြုပြင်ရန်အတွက် Glasnost ပွင့်လင်းရေးနှင့် Perestroika ပြုပြင်ရေးကို ဂိုဘာချော့က စတင်ကျင့်သုံးသည်။ ဂိုဘာချော့ စလိုက်သော ပြုပြင်ရေးတွင် ပြည်သူလူထု ပါဝင်လှုပ်ရှားလာသည့်အတွက် နောက်ဆုံး၌ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်အထိ အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်လာ၍ ရုရှ၌ အရင်းရှင်ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်း စစ်ဗိုလ်ကပင် ဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြသည်။ ရုရှ၌ ဂိုဘာချော့လုပ်သကဲ့သို့ မြန်မာပြည်တွင် ဗိုလ်ခင်ညွန့် လုပ်လေမလားဟု တွေးကြည့်ကြ၏။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့အုပ်စုကို ဒီမိုကရေစီလိုလားသူအဖြစ် ပြောဆို ရေးသားမှုများပင် ရှိလာ၏။ သို့သော် ကွဲပြားခြားနားမှု အများကြီးရှိသည်။ ဂိုဘာချော့သည် ကမ္ဘာကလေးစားရသည့် ပညာတတ်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်၏။ ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၌ အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကမူ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ အိမ်ကျွန်ဘ၀မှ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူဖြစ်သဖြင့် ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် စစ်ကောင်စီကို ကျော်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
နအဖစစ်အုပ်စုသည် အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒမရှိပါ။ စေ့စပ်ဆွေးနွေး၍ ပြဿနာ အဖြေရှာရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက တိုက်တွန်းလွန်းသဖြင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဂိုဏ်းက အရာရှိအချို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေးကြသည်။ ဤတွင် မြန်မာစစ်အုပ်စု၌ အတိုက်အခံနှင့်ဆွေးနွေးလိုသူနှင့် မဆွေးနွေးလိုသူဟူ၍ အုပ်စု (၂) စုကွဲသွားပြီဟူသော ကောလာဟလထွက်လာသည်။ ဆွေးနွေးလိုသည့် စစ်အုပ်စု အရေးနိမ့်သွား၍ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့အဖွဲ့ကို ဖြုတ်ထုတ်ထောင်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် စစ်တပ် စားခွက်လုရာမှာ ထောက်လှမ်းရေးပြုတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်သူများလည်းရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးခြင်း မပြုသေးပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးတွင် မျက်နှာပန်းလှစေရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နအဖကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နေခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် ၎င်းတို့ဆက်လက်အာဏာရှိနိုင်မည့် အပြောင်းအလဲကိုသာ စိတ်ဝင်စားပါသည်။ အာဏာလက်လွတ်ဖြစ်သွားနိုင်သော အစီအစဉ်နှင့် အပြောင်းအလဲကို စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက လက်မခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော နိုင်ငံရေးအင်အားစု ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် စစ်အစိုးရက ဟန့်တားနေခြင်းဖြစ်၏။
စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် အခြေအနေကိုလိုက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာနိုင်သည်ဟု ပြည်တွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်အချို့က မျှော်လင့်ကြသည်။ နအဖအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်၍ မှေးလိုက်နေပါက တဖြည်းဖြည်း ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆသူများလည်းရှိသည်။ သို့သော်လည်း နအဖစစ်အုပ်စုတွင် အရပ်သားနှင့်တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးသော အစဉ်အလာမရှိပါ။ အချို့ကလည်း နိုင်ငံခြားအာဏာရှင်နိုင်ငံများမှ အသွင်ကူးပြောင်းရေးပုံစံများကို အားကျကြသည်။ ချီလီနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်က ပြဋ္ဌာန်းသော အခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ပုံကို ဥပမာပြကြ၏။
နအဖစစ်အုပ်စုသည် ၁၉၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကဲ့သို့သော လူထုအုံကြွမှုကို အလွန်ကြောက်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကို လူစုခွဲပစ်ပြီး မြို့တော်ကို ကြပ်ပြေးသို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ သံဃာဦးဆောင်သော ၂၀၀၇ ပြည်သူ့ဆန္ဒပြပွဲကို အလွယ်တကူချေမှုန်းနိုင်ပြီး နအဖစစ်အုပ်စုပြိုကွဲမည့် အရိပ်အရောင်မပြသဖြင့် ကြပ်ပြေးသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည် အာဏာတည်မြဲရေး စီမံချက်၏ အရေးကြီးသော အဆင့်တဆင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
အနာဂတ်ပျောက်နေ၍ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသူဦးရေ တိုးပွားလာလေလေ စစ်အာဏာရှင်အတွက် အနုတ်လက္ခဏာ များလေလေ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အရပ်သားလူတန်းစားတခုတည်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရုံဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးမချုပ်နိုင်ကြောင်း မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းက သက်သေပြနေသည်။ ထို့ကြောင့် မကျေနပ်သော အရပ်သားနှင့် မကျေနပ်သော စစ်သား ပေါင်းစည်းမိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်း စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် အကွဲအပြဲဖြစ်သွားပါက စစ်အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်ရန် အလားအလာ ပိုကောင်းသွားပေမည်။
ထို့ကြောင့် အရပ်သားနှင့် စစ်သားပေါင်းစည်းသွား၍ အခွင့်ထူးခံအာဏာရှင်စနစ်ကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော အင်အားစုကြီး မပေါ်ပေါက်စေရန် နအဖစစ်အစိုးရက အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေရပေသည်။ သတင်းမီဒီယာကိုချုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အတိုက်အခံကို ဖိနှိပ်၍ အကွဲအပြဲဖြစ်နေအောင် စီမံထားခြင်း၊ အစိုးရအမှုထမ်းနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ကွာဟချက်ကြီးမားအောင် လုပ်ထားခြင်း၊ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် ပြည်သူ့စစ်ကို ခါးပိုက်ဆောင်တပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားခြင်း၊ တပ်တွင်းပဋိပက္ခများကို လျှို့ဝှက်ထားခြင်း စသည့်လုပ်ရပ်များသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျားကန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်များကို အာရုံစိုက်နေရသော မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အုပ်စုသည် ကြိုးတန်းပေါ်၌ လမ်းလျှောက်နေသူနှင့်တူ၏။ သတိလစ်သွားသည်နှင့် ပြုတ်ကျမည်မှာ သေချာ၏။
Posted by Ashin dhamma at 12:41 AM 1 comments
ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး
န၀တ(ခေါ်) နအဖ စစ်မိစ္ဆာအာဏာရှင်ခေတ်
၂၀၁၀မှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်
မြန်မာ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ သွေးချွေးမြောက်များစွာက ကျွန်ုပ်တို့နင်းလျှောက်နေတဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ တစ်စစီပြန့်ကျဲနေဆဲ၊ ဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကြောင့် လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပျောက်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ အမိမြန်မာပြည်ကြီး၊ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်ရိရွဲနေတဲ့ အိမ်အိုကြီးတစ်လုံးပမာ၊ အသက်အရွယ်က(၆၂)နှစ်……
ဖဆပလခေတ်၊ မဆလခေတ်၊ န၀တခေတ်၊ နအဖခေတ်၊ ခေတ်လေးခေတ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး၊ နှစ်အားဖြင့်(၆၂)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ၊ဘယ်ခေတ်အခါနှင့်မှမတူအောင် အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်ကတော့ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ သင်တို့ မျက်ဝါးထင်ထင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသည့် နအဖစစ်အာဏာရှင် ခေတ်ဆိုး ခေတ်ပျက်ကြီး၊ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့ သင်တို့တစ်တွေလူဖြစ်လာကြတယ်၊ တိုင်းပြည်မှာ ပညာတတ်တွေ ရှားပါးပျောက်ကွယ် မျိုးသုဉ်းတော့မည့်အခြေအနေ၊
စားဝတ်နေရေးကအထွေကြပ်တည်း၊ကုန်ဈေနှုန်းတွေကအဆမတန်တက်၊ ဘ၀တွေပျက်၊မျက်စိသူငယ်၊နားသူငယ်နှင့် နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စွာ ရပ်တည်နေရသည့် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စုတ်ပြတ်နှုံခြာသည့်ဘ၀၊ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာတွေကို မြိန်ရေယှက်ရေး စားသုံးနေပြီး အာဏာကို မိမိကိုယ်ပိုင်အဖြစ်အသုံးချကာ ထင်တိုင်းကြဲနေသည့် သန်းရွှေနှင့်အပေါင်းအပါတစ်စု၊ အာဏာရှင်လူတစ်စုပြုသမျှနုခံနေကြရသည့် သန်း (၅၀) ကျော်သော ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀၊ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေ အသက်ပေးကာ အရယူပေးခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးသည် သန်းရွှေနှင့်အပေါင်းအပါများခံစားဖို့သက်သက်ဖြစ်ခဲ့လေသလား၊ အမျိုဂုဏ်၊ဇာတိဂုဏ်၊ရှိရှိသမျှဂုဏ်တွေလဲ ပြောင်သလင်းခါအောင် ကုန်စဉ်ခဲ့ရလေပြီ၊ အာဏာရှင်လူတစ်စုကတော့ အာဏာရူးလို့ကောင်းကြဆဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ချမှတ်ခဲ့သော လမ်းစဉ်သည် စစ်တပ်သည် တိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်ရမည်၊ တိုင်းပြည်သည်စစ်တပ်အတွက်မဖြစ်စေရ၊ အရာရာအားလုံးသည် စစ်တပ်အတွက်ဖြစ်နေသော တိုင်းပြည်သည် အဘယ်မှာလျှင် ကြီးပွားတိုးတက်တော့မည်နည်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ထူထောင်ခဲ့သော ဗမာတပ်မတော်သည် မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ထောက်ခံမှုအပြည့်အ၀ ရရှိခဲ့သောတပ်မတော်ဖြစ်သည်။သန်းရွှေတည်ထောင်ထားသော ယနေ့ခေတ် တပ်မတော်သည် မြောင်းထဲရောက်နေရုံမက တွေ့သည့်နေရာတွင် ခွေးပါမကျန် အဟောင်ခံနေရသည့် ဘ၀မျိုးဖြစ်နေကြပေပြီ၊
စစ်အာဏာရှင် တစ်ကိုယ်ကောင်းအတ္တ၀ါဒီသမားများ တိုင်းပြည်တွင်အာဏာရလာသည့်အခါ တပ်မတော်သည် အာဏာရှင်တပ်မတော်ဖြစ်လာသည်။ လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျသည့် စိတ်ယုတ် စိတ်မိုက်တို့ ထွန်းကားပြန့်ပွားလာသည်။ ပြည်သူကို အမျိုးမျိုးသော လက်နက်ကြီးငယ်ဟူသမျှတို့နှင့် ခြိမ်းခြောက်ပြီး အကြောက်တရားများ ကိန်းအောင်းနေအောင် ပြုမူလုပ်ဆောင်ထား၏၊ တိုင်းပြည်မှ ရသမျှ ဘဏ္ဍာကြေးငွေတို့ကို စစ်လက်နက်အမျိုးမျိုးဝယ်ယူကာ ဖြုန်းတီးပစ်၏၊ အမှန်တကယ်လိုအပ်လျှက်ရှိသော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစသည့် နေရာများ၌ အသုံးမပြု၊ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ဖိစီးနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံစားနေကြရသော မြန်မာပြည်သူတို့၏ဘ၀သည် နှစ်၊လ၊ရက်တို့ ကြာညောင်းလာသည့်အခါ ပရုတ်လုံးကဲ့သို့ လုံးပါးပါးသည့်ဘ၀အခြေသို့ ဆိုက်ရောက်နေကြပေပြီ။
မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာသည် မိမိတာဝန် မိမိကျေပြွန်စွာ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြလျှင် အခက်အခဲမှန်သမျှ ပြေလည်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်၏တာဝန်သည် နိုင်ငံတော်၏လွတ်လပ်ရေးကို ကာကွယ်ပေးရမည့်တာဝန်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံတော်၏လွတ်လပ်ရေးကို အုပ်ချုပ်ရမည့်တာဝန်မဟုတ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးကို လုပ်ချင်သည့်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်၊အုပ်ချုပ်နိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိခဲ့လျှင် လွတ်လပ်သောပြည်သူတစ်ယောက်အဖြစ်ဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှု အပြည့်အ၀ရရှိအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ပေသည်။ဒါကိုပင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဟုခေါ်ဆိုသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်သည် တိုင်းပြည်အတွက် ဘာတစ်ခုမှကောင်းကျိုးမဖြစ်သည်ကို လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်(၄၀) ကျော်က သက်သေပြခဲ့ပြီဖြစ်သည်၊ ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုပဲ နောက်တစ်ခါ အသက်ပြန်သွင်းဖို့ အာဏာရှင်တွေက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြလေပြီ။အဓိကအရေးကြီးသည်မှာ ပြည်သူတွေ လမ်းမှာ မလိုက်မိကြဖို့လိုသည်။အတွေးတစ်ချက်မှားလျှင်ဖြင့် တစ်သက်စာ သားစဉ်မျိုးဆက် ဘ၀ပျက်မည့်ကိန်းသို့ ဆိုက်ရောက်မည်ဆိုသည်ကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။အာဏာရှင်ကို မိမိတို့ ဘုံရည်မှန်းချက်တူညီစွာဖြင့် တိုက်ဖျက်ပစ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဘိုးအဘွားများ၏ အသက်သွေးချွေးပေးဆပ်ကာ အရယူပေးခဲ့သော အမိမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး၏ အနှစ်သာရကို ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။အမှန်တကယ်လွတ်လပ်ပြီး အမှန်တကယ် အနှစ်သာရပြည့်ဝသည့် လွတ်လပ်ရေးရရှိအောင်၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစနစ်ထွန်းကားအောင်၊ တာဝန်သိပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီမှသည် တာဝန်ရှိပြည်သူတစ်ယောက်အဖြစ် မိမိတိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်ခြင်း တို့ကို ဖော်ဆောင်ကြရန်အချိန်ကြရောက်ပီဖြစ်ပါကြောင်း
Posted by Ashin dhamma at 11:13 PM2comments
မင်းကို ဖိတ်မန္တက မပြုဘဲ မင်းရောက်သွားခဲ့ရင်
တချို့က မင်းကို ၀င်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်။ တချို့က ခွင့်ပြုသော်လည်း သိပ်ဝမ်းသာကြမှာမဟုတ်ဘူး။
သို့သော် . . . မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့မင်းကို
အမြဲထာဝရ ၀မ်းသာစွာ ကြိုဆိုနေမယ့်သူ တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။
ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်သူ့ထံမဆို . . .
မင်းဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ အငြိမ့်သား ထိုင်စားနေရင်
တချို့က မင်းကို ဆူဆဲမယ်၊ တချို့က မင်းကို နှင်ထုတ်မယ်။
သို့သော် . . . မင်းကို ဆူဆဲခြင်း၊ နှင်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ အမြဲကျွေးမွေးနေမယ့်သူ တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။
မင်းသူတို့အပေါ် ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်တွေ အန်ဖတ်တွေ စွန့်မိခဲ့ရင်
သူတို့ရွံရှာပြီး မင်းကို ပထုတ်ပစ်မှာပဲ။
သို့သော်. . . မင်းကို စေတနာနဲ့ သန့်စင်ပေးပြီး ပ မထုတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။
မင်းက ဒေါသူပုန်ထပြီး ထွက်ခွာသွားရင်
လူအချို့က မင်းကို “ထွက်သွား ထွက်သွား . . . ဝေးလေ ကောင်းလေ”လို့ ပြောမှာ။
သို့သော် . . . မင်းကို မသွားချင်တဲ့သူ မင်းကို လိုက်ချော့မော့ခေါ်မယ့်သူ တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။
မင်းသူများအပေါ် မိုက်မဲရူးရဲစွာ ဆက်ဆံခဲ့ရင်
သူများက မင်းကို ခွင့်မလွတ်ဘဲ တုန့်ပြန်မယ်။
သို့သော် . . . မင်းကို ထာဝရ ခွင့်လွတ်ပြီး တုန့်ပြန်ခြင်း ကင်းသူ တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။
မင်းသူတို့ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး အလိုလိုက်ခဲ့ရင်
တချို့က မင်းကို ပြန်မြတ်နိုးပြီး အလိုလိုက်နိုင်တယ်။
တချို့ကတော့ မင်းကို စိမ်းကားပြီး Shift နှိပ်ပြီး Delete လုပ်ပစ်မယ်။
သို့သော် . . . မင်းသူ့ကို မြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေ မမြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေ
မင်းသူ့ကို အလိုလိုက်သည်ဖြစ်စေ မလိုက်သည်ဖြစ်စေ
မင်းကို အစဉ်ထာဝရ ချစ်မြတ်နိုးနေပြီး ဇိဝှိန်ချုပ်တဲ့အထိ အလိုလိုက်နေမယ့်သူ တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။
အဲဒီသူက ဘယ်သူလို့ မင်းထင်သလဲ . . . ?
“အမေ”ကလွဲပြီး ဘယ်သူဖြစ်နိုင်ဦးမှာလဲ . . . ?
(၃၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉) ၁၃၇၁ ခု၊ “ပြာသိုလပြည့် အမေနေ့”ကို ဂုဏ်ပြုလျက်။
အရှင်သုခမိန္ဒ (စ၀်ဆုခမ်း တန့်ယန်း)
Posted by Ashin dhamma at 1:38 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 7:34 AM0comments